Budada Raw Testosterone (58-22-0) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
3.00 ka mid ah 5 ku saleysan 2 ratings macaamiisha
Testosterone Powder (CAS 58-22-0) waa hoormoon u habaynaya dhowr geedi socod oo ka mid ah jirka aadanaha. Ragga, testosterone Powder ayaa qarsoodi ah marka la eego haweenka iyada oo qarsoodi ah qanjidhada adrenal iyo ugxansiisyada, iyada oo qaar ka mid ah lagu sameeyo iyada oo loo marayo isbedelka qumman ee hormoon kale, androstenedione.
Testosterone intooda badani ma aha mid si xor ah u heli kara dhiigga, laakiin waxay ku xiran tahay labada albumin ama hormoonka galbobbing ee globulin (SHBG). Testosterone unugta oo ku xidhan albaabiinta ayaa lagu sheegay inay noqdaan kuwo firfircoon oo bio-la heli karo, halka testosterone ku xiran tahay SHBG aan la heli karin oo aan awoodin in ay fuliso shaqadooda.
Qalabka tijaabada ah ee testosterone (58-22-0)
Budada tijaabada ah ee loo yaqaan 'Root testosterone' ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo hypogonadism iyo noocyada kansarka naasaha qaarkood. Ma cadda haddii isticmaalka budada Testosterone ee heerarka hooseeya ay sabab u tahay da'da ay faa'iido u leedahay ama waxyeeli karto. Testosterone waxaa loo isticmaali karaa jel ama boog loo isticmaalo maqaarka, lagu duro murqo, kaniiniga la dhigo dhabanka, ama kiniin afka laga qaato.
Macdanta tijaabada ah ee loo yaqaan 'testosterone Raven' ayaa loo isticmaalaa nooc ka mid ah doping oo ka mid ah cayaaraha si loo hagaajiyo waxqabadka.
Cudurrada anabolic-androgenic steroid (AAS), oo ay ku jiraan budada testosterone Root iyo esters, ayaa sidoo kale loo qaaday si kor loogu qaado koritaanka muruqa, xoog, ama dulqaad. Waxay si toos ah u sameeyaan iyagoo sii kordhinaya qalabka borotiinka ee murqaha. Natiijadu, natiijada muruqyada muruqyada waxay noqotaa mid aad u ballaaran oo dayactir ka dhaqso badan dadka caadiga ah.
Biyaha tijaabada ah ee tijaabada ah (58-22-0) Smamnuucista
Product Name Budada tijaabada ah ee Root
Magaca Kiimikada Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Stridi, Digniin, Delatestryl, Androderm, oo sidoo kale loogu yeero Tijaabo, ama Baadhitaan, testosterone no ester.
brand NAme Andriol, Androderm, AndroGel, Axiron, Delatestryl, Biyo-baarsi ah Baaritaan, Baaritaan, Nebido, Omnadren, Primoteston, Sustanon, Imtixaan, TestoGel, TestoPatch, Testoviron, iyo Tostran
Fasalka Daroogada Androgen, steroid anabolic, wakiilka anabolic
Molecular Wsideed 288.42
barafku Psaliid 153-157 ° C
Biological Life-Life Saacadaha 2-4
Imaanshaha Caddaan cad ama midab cad ama cad cad oo huruud ah
SOlubility Biyaha, 23.4 mg / L at 25 deg C
Codsiga Hormoonka steroid, daawada, jel, boog, jirka dhismaha
Waa maxay budada tijaabada ah ee tijaabada ah (58-22-0)?
Budada tijaabada ayaa ah hormoon lab ah oo lab ah oo laga sameeyay xiniinyaha. Heerarka hoormoonka hormoonada ayaa muhiim u ah horumarka galmada iyo shaqada galmada ee caadiga ah.
Inta lagu jiro da'da (sannadka dhalashada), testosterone waxay ka caawisaa wiilasha inay yeeshaan sifooyin lab ah sida jidhka iyo wajiga timaha, codka qoto dheer, iyo xoogga muruqa. Ragga waxay u baahan yihiin testosterone si ay u sameeyaan shahwada. Heerarka testosterone guud ahaan waxay yareeyaan da'da, sidaas darteed ragga da'da ah waxay u muuqdaan in ay leeyihiin heerarka dhiigga ee testosteron hoos u dhaco.
Sidee budada tijaabada ah ee Raven (58-22-0) shuqullada
Kiniinada tijaabada ah ee loo yaqaan 'testosterone' waa 'androgen' oo loo yaqaan 'therapy for therapy replacement' in ragga ku jira xaaladaha la xiriira calaamadaha heerarka testosterone ee hooseeya jirka ama maqnaanshaha testosterone endogenous. Waa hoormoon jinsi ah oo ay soo saarto tijaabooyinka dhiirigeliya horumarinta sifooyinka lab ah ee lab ah. Heerarka sare ee hoormoonka ayaa faa'iido u leh caafimaadka ragga. Heerarka caafimaadka leh ee hoormoonka waxay kor u qaadaan caafimaadka wanaagsan iyagoo hoos u dhigaya halista dhiig kar iyo wadno-qabad wadnaha, marka lagu daro cunto caafimaad leh oo caafimaad leh. Weli, testosterone waxaa la siin karaa daaweyn xaalado caafimaad oo gaar ah iyo heerarka hoose ee testosterone labadaba ragga iyo dumarka labadaba.
Gacan-siinta asaasiga ah (dhalan-la'aanta ama helitaanka) -waxbarasho la'aanta sababo la xidhiidha cryptorchidism, bilateraltorsion, orchitis, cillad wadnaha; ama orchidectomy.
Hypogonadotropic hypogonadism (ku-dhalasho ama helid) - gonadotropin ama LHRH yaraanta, ama dhaawaca pituitary-hypothalamic ee burooyinka, dhaawacyada, ama shucaaca.
Badbaadinta iyo wax-qabadka DEPO-Testosterone (testosterone cypionate) ragga oo leh "jinsiga ku xiran da'da" (sidoo kale loo yaqaan "asal-ku-dhalashada") ayaa aan la dhicin.
Boodhka tijaabada waxaa laga heli karaa magacyada kala duwan ee soo socda: Aveed, Depo-Testosterone, Delatestryl, iyo Testopel.
Qiyaasta jirka ee jirka ee jirka ee steroidkani caadi ahaan wuxuu ku jiraa 400-1200mg wiiggii wiigga iyo mudada wareeggu wuxuu noqon doonaa toddobaadyada 8-20, iyadoo ku xiran koorsada ujeedooyinka cayaaraha. Dumarku waxay caadi ahaan arkaan natiijooyinka la rabo laga bilaabo qiyaasaha 50-100mgs asbuucii.
Isticmaalka budada ah ee tijaabada ah (58-22-0)
Testosterone Powder waa hormoonka jinsiga ugu weyn ee labka ah ee naasaha iyo waa hormoon steroid ah oo leh xashiitada CONUMX. Waa hormoonka galmada ugu weyn ee labka ah ee loo yaqaan 'testes', oo sidoo kale ah hormoonka jinsiga ugu firfircoon. Waxay kor u qaaddaa xayawaanka aadanaha iyo xayawaanka 'jinsiga' iyo horumarinta jinsiga labaad ee jinsiga, shahwada koritaanka, iyo dheef-shiid kiimikaad ee murqaha xoojinta. Testosterone Powder wuxuu koontaroolaa koritaanka iyo horumarinta xubnaha galmada ragga iyo sifooyinka labka dheddig ee labka ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta beddelaadda eupacism, daawaynta ragga dhalmada ee menopause, iyo daaweyn aan loo baahnayn, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa cilmi baarista biochemical.
Soo iibso budo tijaabo ah laga bilaabo Buyaas.com